Dhaamsa Hatattamaa Jaal Marrii irra: Uummata Oromoo Maraaf
HomeAfaan OromooDhaamsa Hatattamaa Jaal Marrii irra: Uummata Oromoo Maraaf
#DHAAMSA HATATTAMAA JAAL MARROO IRRA:- #UUMMATA OROMOO MARAAF;-
Guraandhala 16, 2019
Nagaan isiniif haata’u. Nagaa kootti aansee diinni huma ishii gara keenyaatti karaa lafoo fi xiyyaaraan akka guuraa jirtu argaa jirra. Araara jechuun yaadaa fi qalbii uummata keenyaa akkasumas safuu abbaa gadaa eeguuf jecha yoo ofqusannes EPRDF kallatti hundaan nutti dhufaa jirti. Bakka baayyeettis lola nurratti banteetti. WBOn humnas dandeettii ofirraa ittisuu ghaa ta’e akka qabu uummata koof ibsaa karaa kana waanti uummata koo yaaddessu tokkollee akka hinjrre hubachuun uummata keenya kan kadhannu odeefffannoon akka nubira dhaabbattanidha,jechuun dhaammataniiru!!
INJIFANNOON UUMMATA OROOMOOF!!
IBSA EJJENNOO QEERROO BILISUMMAA OROMOO GUUTUU OROMIYAARRAA
Qeerroon bilisummaa Oromoo walga’ii haala yeroo ilaalchisee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ibsa ejjennoo isaa baafachuun milkiin walga’ii isaa xumureera
Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo kan wareegamaaf dhiiga qulqulluu keenya dhangalaasaa turreef walabummaa Oromootiif malee paartii siyaasaa kamiin iyyuu aangomsuuf miti.
Dhugaa mudhiittii ofhiiknee sobaan mudhii hinhidhannu.
Akkuma beekamu korri abbootii gadaa miseensota 71 ofkeessaa qabu ijaaramee dhimma araara ABO fi mootummaa Itiyoopiyaa gidduu jiru akka xumuruuf ka’amuun isaa beekamaadha.garuu dubbichi shiraan kan erbamee fi sukkuumame ta’uu hubannee uummata ballaa Oromoo fi Oromiyaa hubachiisuu feena.
Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa ibsa koreewwan tekinikaa gaazzexeessitootaaf ibsame irratti gaazzexeessitootni dhimma WBO irratti gaaffii gaafataniif deebii osoo hinargatin hafaniiru.
Koree tekinikaa keessaa yaada kennameen alaabaa dhiiga goototaan dhuftee fi alaabaa ilmaan Oromoo ittii hidhamaa,itti dararamaa ture lafa keessanii mooraa galtu jechuun ibsa kennan.
Haaluma kanaan walqabatee ibsa ejjennoo qabxiilee kanaa gadii akka guutuu Oromiyaattii qeerroon bilisummaa Oromoo baafneerra.
shira maqaa araaraatiin WBO irratti garee tekinikaa fi mootummaan qindeeffamee jiru niiqolanna malee hinfudhannu.
bboota gadaa niikabajna nii ajejamnaafis garuu murtee mootummaatiin raayyaan ittisa biyyaa osoo ajjeesaa jiruu waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa lafa kaa’ee mooraa haagalu murtoo jettu gonkumaa hinfudhannu.
Dr Abiyyi diina oromooti malee oromoodha jennee hinfudhannu.osoo waraanni isaan hoogganamu ilmaan oromoo duguugaa jiruu misirroon illee cidha isaa irratti ajjeefamuu mootummaan kun oromoof dhaabbate jechuu hindandeenyu. Kanaaf nuti qeerroon oromoo mootummaa kana niibalaaleffanna.
Deggertootnii fi miseensonni ABO adamsamaa osoo jiranii araarri araara goyoomsaati malee kan dhugaa akka hintaane walhubachiifna.
waraanni Dr Abiyyii fi lammaan hoogganamu ajjeechaa suukanneessaa kan raawwachaa jiru ajeja isaaniitiin ta’uu oromoonni hundi akka hubattan akeekuu feena.
Qeerroon bilisummaa oromoo bilisummaa oromootiif lubbuu jijjiirraa hinqabne kan laannuu fi gutuu oromiyaattii kan itti fufnu tahuu isin hubachiifna.
Gootichi waraana bilisummaa oromoo tarkaanfii isaa qabsoo karaa nagaatiif jecha addaan kutee ture diina oromoo irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuu akka qabu asumaan dhaammanna.
Abbaa gadaas ta’e koreen tekinikaa shira isin mootummaa waliin ta’uun WBO mooraa galchuuf hojjechaa jirtan icitii jiru hunda qerroon bilisummaa saaxiluuf qophii isaa xumureera.
Manni deggertoota ABO bakkoota addaa addaatti gubachuu,saamamuu fi abbaa fi haadha jelatti ilmaan lama ajjeesuu lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti ta’aa jiru cimsinee baleeleffanna
waraannii mootummaa Itiyoophiyaa guutuu Oromiyaa meeshaalee gurguddaan qabeenya uummataa manchaasaa jiru guyyoota muraa gidduutti Oromiyaa gadhiisee hinba’u taanaan fincila maayii garbummaa itti fufuuf qeerroon qophii xumuruu isaa ibsa.
QEERROO BILISUMMAA OROMOO GUUTUU OROMIYAA IRRAA
Jawar and his likes are rats that dances infront of cat’s nose . He is singing and dancing beating Abyssinians drum.Like his precedes Haile Fida, he will be the prey of voracious Abbyssinians that thirsty to suck Oromo blood.He\_they disarmed himself\_themselves ideologically and politically now transformed to dis arm the people.they are double fold criminals and sinners that fall in the hands of Abyssinians once again in 21 century.Only the almighty knows what will happen next to the oromo cause and militants. All are in one basket now,at any time if basket is dropped another dirty history will be recorded.let the almighty allow us to reverse the wrong stand our militants took to fail us once again. History will not excuse all Oromo militants if once gain doomed to the prey of Abyssinians.